Ukuphakama okuphezulu kanye nentengo eshibhile CNC Machining factory China | I-PTJ Hardware, Inc.
I-PTJ ifektri eyaziwayo ye-CNC Machining eDongguan.China, Izibophezele ekubeni yinkampani eneminyaka eyikhulu emkhakheni wezimboni. Kusetshenziswa imishini esezingeni eliphakeme yama-axis amahlanu, amasistimu wokuphathwa kwe-ERP enzelwe izimo zangempela zesitshalo, futhi aqede isitifiketi se-ISO9001, i-PTJ inamandla okuqedela ukunemba kwanoma yikuphi ukucubungula izingxenye zezingxenyekazi zekhompyutha. Ngokokuqala ngqa emhlabeni, kuye kwagcwaliseka "ikhotheshini elingu-1, ihora elingu-1 emshinini" lezingxenye ezingejwayelekile ezakhiwe, okwenyuse ukusebenza kahle kwezingxenye zezakhiwo ngo-50% kanye nomkhawulo wenzuzo ngo-10%. Njengamanje, i-PTJ isiza abasunguli bezinto ezintsha emhlabeni wonke ukuthi bashintshe imikhiqizo isuke kwimidwebo ibe yinto yangempela, isuke ezimotweni ezisetshenziswayo iye kwimikhiqizo ekhiqizwa ngobuningi, isiza izinkampani ukuthi zikhule kusukela ekuqaleni kuya ekubeni yimidondoshiya yezimboni.
Imboni ye-PTJ ifunde kokuqalwa kwezingxenyekazi zekhompuyutha ukuthi iningi lamaqembu lisuselwe kubuchwepheshe nethalente le-R & D, futhi abekho ochwepheshe kwezokuhlinzeka nangokwenza izinto. Iziqalisi ze-Hardware zikholelwa ukuthi kunemakethe yezobuchwepheshe ne-R & D, kepha bazishaya indiva izinkinga ababhekana nazo kwinqubo yokukhiqiza. Okokuqala, kunzima ukuthola uhlelo lokukhiqiza Okwesibili, kunzima futhi kuthatha isikhathi ukuthola imboni evumelana kangcono nezidingo zezingxenye zabo zenkambiso. Bachitha isikhathi esiningi bebiza uphenyo, bethumela imidwebo, belinde impendulo, kepha bengalokothi bathole intengo engcono kakhulu nesikhathi esanele sokulethwa.
Ngaphezu kwalokho, isitolo se-PTJ siyaqonda ukuthi amakhasimende kaningi anemijikelezo emide yokuthuthuka ngenxa yezinkinga zokukhiqiza ngesikhathi sokukhiqizwa komkhiqizo, futhi ikhwalithi kunzima kakhulu ukuyilawula. Ngemuva kokuqonda okujulile kwamaphoyinti obuhlungu bekhasimende, i-PTJ izoqhubeka nokwenza ngcono izixazululo zezinkinga ezihlangabezane nokuqalwa kwezingxenyekazi zekhompiyutha lapho zibhekene nezinkinga zokwenza imishini ngokunemba. Sinabaklami abanolwazi, abaklami bezakhiwo, imishini, onjiniyela be-CNC, nonjiniyela besandla. Onjiniyela abangochwepheshe abangaphezu kwama-200, njengonjiniyela besikhunta, bangasiza ukuqala kwezingxenyekazi zekhompuyutha kusuka ekuthuthukisweni komkhiqizo, ekwakhiweni, ekubanjweni ngesandla ekukhiqizeni ngobuningi, nokuxazulula izinkinga zokuhlinzekwa kweziqalo zehadiwe.
Inqubo yokulandelela i-oda ye-PTJ ingabhekwa kusukela kwinqubo yekhasimende yokuthumela okufunwayo, ikhotheshini yomthengisi, ukucutshungulwa kwe-oda, ukukhiqizwa kweworkshop, ukuhlolwa kwekhwalithi nokudilivwa, njll, okuthuthukisa kakhulu ijubane nekhwalithi yemikhiqizo yabasebenzisi.
Isikhathi esimaphakathi sokuthola izingxenye sifinyezwe ngaphezu kuka-50%, kanti intengo ingaphansi ngama-30% kunemboni.
Ikhono lokucubungula elizisebenzelayo le-PTJ nalo lihola phambili embonini, linamadivayisi angaphezu kuka-300, angaphezu kwengxenye yawo angenisiwe.
Namuhla, kusukela ekuqaleni kuya ezinkampanini ze-Fortune 500, bangajabulela kalula izinsizakalo zokukhiqiza ezinengqondo.